Fahamka Isbeddellada ECommerce: Ganacsiga Omnichannel | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Fahamka Isbeddellada Ecommerce: Ganacsiga Omnichannel
Fahamka Isbeddellada Ecommerce: Ganacsiga Omnichannel
Dunida aan ku noolnahay si degdeg ah ayey isu beddeshaa. Jiilalka da'da yari waxay noqdeen xoog haga qaadashada tignoolajiyada cusub, iyo rajooyinka ay ka filayaan waayo-aragnimada dhijitaalka ah ayaa si joogto ah u dhaqaajinaya cirbadda "maxaa soo socda" habka dhammaanteen ula falgalaan khadka.
Iyadoo taas la leeyahay, waxaa muhiim u ah ganacsiyada inay ka hormaraan qalooca oo ay fahmaan isbeddellada berrito si ay ugu koraan muuqaal tartan leh.
Inkasta oo fikradda Ganacsiga Omnichannel inta badan lagu qeexo "isbeddel," waa halkan in la sii joogo-ugu yaraan, mustaqbalka la filayo. Sida habdhaqanka wax iibsiga u kobcayo, waxaa jirta baahi loo qabo ganacsiyada inay hal-abuuraan oo ay la qabsadaan caqabadaha cusub. Omnichannel wuxuu bixiyaa waddo cad oo lagu dhammaystiro labadaba.
Iyada oo dhaqdhaqaaqa internetka uu kor u kaco, ganacsiga dhijitaalka ah ayaa noqday diiradda ugu weyn ee ganacsiyada kala duwan.
Gaar ahaan inta lagu jiro masiibada Covid-19, ganacsiga dhijitaalka ah wuxuu noqday diiradda ugu weyn. Si aad ugu noolaato suuq si degdeg ah isu beddelaya, ganacsiyada leben-iyo-hoobiye waxay ku qasbanaadeen inay si degdeg ah ula qabsadaan, dhistaan ​​joogitaan khadka ah, oo ay balaadhiyaan awoodooda eCommerce.
Maqaalkan, waxaan ku dabooli doonaa xeeladaha ganacsiga dhijitaalka ah ee koraya korsashada, annagoo diiradda saarayna Ganacsiga Omnichannel gaar ahaan. Waa maxay hadafku? Kordhinta dakhliga, u kaxaynta taraafikada badan ee dukaamada, iyo hagaajinta xariiqda hoose had iyo jeer waa yoolka ganacsiga. Laakiin ujeedada sare ayaa ugu dambeyntii abuureysa khibrad wax iibsiga oo wanaagsan macaamiishaada.
Is dhexgalka macmiil kasta waa la tiriyaa. Markaa waa muhiim inaad uga jawaabto baahidooda hab istiraatijiyadeed oo siinaya khibradda ugu fiican ee suurtogalka ah macaamiisha taageeraya ganacsigaaga.
Qaybtan koowaad ee taxane saddex qaybood ka kooban oo ku saabsan isbeddellada e-commerce, waxaanu dabooli doonaa qaybaha soo socda:
Waa maxay Ganacsiga Omnichannel?
Ganacsiga Omnichannel ma shaqeeyaa?
Waa maxay faa'iidooyinka Ganacsiga Omnichannel?
Ganacsiga Omnichannel oo leh WordPress
Isku xirka dukaankaaga iyo khibradaha khadkaaga.
Sida laga soo xigtay BloomReach,
"Ganacsiga Omnichannel waa habka iibka badan ee kanaalada diiradda saaraya bixinta khibrad macaamiil ah oo aan kala go 'lahayn haddii macmiilku internetka ka iibsanayo qalabka moobiilka, laptop-ka, ama dukaanka leben-iyo-hoobiye."
Dabcan, hogaamiye kasta oo suuq ah wuxuu leeyahay qeexitaan u gaar ah Omnichannel laakiin istaraatijiyaddu waa mid joogto ah: waxay bixiyaan khibrad macmiil oo isku xidhan oo ku baahsan caalamka iyo internetka.
Fikradan waxaa laga yaabaa in lagu wareero Ganacsiga Multichannel. Taas bedelkeeda, Ganacsiga Multichannel wuxuu bixiyaa kanaalo madax-bannaan oo ay macaamiishu ka iibsan karaan alaabta. Kanaaladani waxay caadi ahaan ku shaqeeyaan silos, oo midba midka kale ka go'o.
Tusaale ahaan, aynu nidhaahno waxaad leedahay degel u shaqeeya sida dukaanka eCommerce, si kastaba ha ahaatee, maaha meesha kaliya ee aad ku iibiso alaabtaada. Kanaalka kale, waxaad sidoo kale ku iibisaa alaabtaada Amazon oo aad dejisay joogitaanka astaantaada gudaha xuduudaha goobtaas.
Intaa waxaa dheer, waxaa laga yaabaa inaad ka faa'iidaysato aaladaha warbaahinta bulshada sida Instagram iyo Facebook si aad u iibiso alaabada oo aad u kordhiso ka qaybgalka macaamiisha. In kasta oo kanaal kasta laga yaabo inuu keligiis natiijooyin wax ku ool ah yeesho, kanaaladani ma wada hadlaan, waana inaad si gaar ah u maamusho agabka, iibka + istiraatiijiyadda suuqgeynta, iyo cabbirrada madal kasta.
Iyadoo Multichannel ay ku lug leedahay kanaalo madax-bannaan oo aad ku iibin karto alaabtaada, Habka Omnichannel wuxuu diiradda saarayaa qabashada dhammaan khibradaha macaamiisha ee astaantaada.
Halkii laga lahaa macaamiishu in ay si isku mid ah uga hawl galaan kanaalo dhawr ah oo aamusan, Omnichannel waxa ay qaadaysaa tallaabo dheeraad ah iyada oo isku xidhaysa waayo-aragnimadan aamusan iyo isku-darka qaybaha kala qaybsan oo dhan midaysan. Si kale haddii loo dhigo, Habkani wuxuu bixiyaa khibrad wax iibsiga isku dhafan iyada oo aan loo eegin meesha uu macaamiishu tago.
Waxaa xusid mudan in Omnichannel uu yahay istiraatiijiyad ku dhiseysa Ganacsiga Multichannel iyadoo isku xireysa dhammaan dhibcooyinka ku qeexan habka Multichannel. Multichannel la'aanteed, Omnichannel ma jiro.
Kanaaladani kuma koobna meelaha lagu iibiyo alaabtaada. Kanaalada kala duwan (iibka iyo suuq-geynta) waxaa ka mid ah dukaanka online-ka ah, dukaanka leben-iyo-hoobiye, aaladaha warbaahinta bulshada, apps-ka moobilka, iimaylka, iyo fariimaha qoraalka ah si loo magacaabo dhowr.
Waxa kale oo jira meelo taabasho ah oo isku dara walxaha jidheed iyo dhijitaalka ah, sida dukaamada is-dhexgalka, tablet-yada, iyo xataa tignoolajiyada shelf ee caqliga leh. Habka Omnichannel, dhammaan kanaaladani waxay isku daraan si ay u siiyaan macmiilka waayo-aragnimo ku-meel-gaar ah - iyada oo macmiilku yahay diiradda udubdhexaadka ah. Hadday wax jiraan, Omnichannel waa hab diiradda lagu saaray naqshadaynta waayo-aragnimada bini'aadamka ee isku dhafan.
Runtii ma jirtaa baahi loo qabo istaraatiijiyada Ganacsiga Omnichannel? Jawaabta gaaban waa, waxay kuxirantahay ujeedooyinka ganacsigaaga.
Haddii aad tahay milkiilaha meherad yar oo u adeegta bulshada deegaanka oo keliya, istaraatiijiyad hal kanaal ah ayaa si fiican u shaqayn karta. Taasi waxay u ekaan kartaa dukaan khadka ah oo ay ku shaqeyso WooCommerce ama goob suuq online ah sida Etsy.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay ganacsi tafaariiqeed oo halgamaya oo lagu maalgeliyay isbeddelka dhijitaalka ah, waxaa habboon in la dhiso joogitaankaaga ganacsiga dhijitaalka ah oo aad siiso khibrad isku dhafan oo macaamiishaada ah.
Sida lagu sheegay daraasad ay samaysay 46,000 oo dukaameystayaal ah oo ay samaysay Harvard Business Review:
Istaraatiijiyada Omnichannel waxay ka duwan tahay tafaariiqda iyo kuwa dhiggooda ah waxayna siisaa tartan tartan ah oo ka sarreeya kuwa online-ka ah iyagoo ka faa'iideysanaya hantidooda dukaanka.
Ka qaybgalayaasha daraasadda, 73% dukaamaystayaashu waxay isticmaaleen kanaalo badan intii lagu jiray socdaalkooda wax iibsiga. Keliya 7% ayaa online-ka ahaa halka 20% ay ahaayeen dukaamo-kaliya wax soo iibsanaya.
Macaamiisha sameeyay cilmi-baadhis online ah oo ku saabsan goobta tafaariiqda ama goobaha kale ka hor intaysan soo iibsanin waxay keeneen 13% kharashka dukaanka dhexdiisa.
Tani waa hal daraasad oo ka mid ah kuwa badan oo si kalsooni leh u sheegaya in dukaamada Omnichannel ay aad uga qiimo badan yihiin dukaamada marka loo eego kuwa hal kanaal ah. Haddi aad tahay tafaariiqle dhaqameed ama kaliya dukaan online ah, ka faa'iidaysiga xeeladaha Omnichannel waxay siin kartaa khibrad wanaagsan dukaamaysatada iyo ugu dambayntii, wanaajiso dakhliga.
Waa maxay faa'iidooyinka Omnichannel?
Waayo-aragnimada macmiilka ee aan cillad lahayn.
Mantra hore, "u adeeg macaamiishaada halka ay joogaan," ayaa weli run ah. Maanta, macaamiishu waxay la falgalaan ganacsiyada iyo magacyadooda iyagoo u maraya meelo badan oo taabashada ah-dijital ah iyo kuwa kaleba.
Laga soo bilaabo baarista alaabada ku jirta balooggaaga ilaa wax iibsiga bulshada ee Instagram, habka Omnichannel wuxuu u oggolaanayaa ganacsiyada inay ku xirnaadaan oo ay la jaan qaadaan macaamilka inta lagu jiro marxalad kasta oo safarka wax iibsiga ah (cilmi-baaris, tijaabi, go'aan, iibso, hel, ama soo noqnoqoshada moodalka AIDA ).
Qaabka Omnichannel oo si buuxda u shaqaynaya, marxalad kasta oo socdaalku waxa ay ka dhici kartaa, kanaallo kala duwan, labadaba khadka iyo khadka.
Iyada oo ku saleysan (2017) daraasad ay samaysay Forrester Research, boqolkiiba iibka khadka tooska ah ee si dhijitaal ahaan loo saameeyay ayaa si joogto ah u kordheysa.
Daraasad cusub oo Forrester Research ah ayaa saadaalisay inay tani kori doonto 58% marka la gaaro 2023.
Si loo muujiyo isbeddelkan sii kordhaya, waxaan u fiirsan karnaa sida ay dukaameeysatadu u rabaan inay wax u iibsadaan. Aynu nidhaahno macmiilku wuxuu xiisaynayaa inuu iibsado boorsada dhabarka. Waxa ugu horreeya ee uu dukaameystahani samayn karo waa in uu talefankiisa u isticmaalo in uu ku baadho badeecada mareegta summada.
Ka dib cilmi-baarista bilawga ah, macmiilku wuxuu isticmaalaa laptop-ka si uu u baadho qiimaha ugu fiican ee qaybaha kala duwan. Waxay ogaadeen in ganacsigu ku iibiyo boorso isku mid ah goobo suuqyo kala duwan oo ay ku jirto Amazon.
In kasta oo Amazon ay ku iibinayso badeecada qiimo jaban, dukaanlahan gaarka ah wuxuu u baahan yahay boorsada dhabarka isla markaaba, safarka maalinta xigta, mana awoodo inuu sugo dhoofinta. Marka, waxay si toos ah wax uga gataan dukaanka onlineka ee meheradda ka dibna waxay booqdaan dukaanka jireed si ay u soo qaataan boorsada dhabarka.
Taasi waa hal tusaale oo kaliya oo ah sida waayo-aragnimada dhijitaalka ah ay u saameyn karto go'aanka iibsashada macmiilka.
Ganacsiyo badan oo qaata habka Omnichannel ayaa siiya macaamiisha ku habboonaanta booqashada dukaanka leben-iyo-hoobiye si ay u soo qaataan alaab ay hadda ka soo iibsadeen online.
Meheradaha soo dhaweeya Ganacsiga Omnichannel waxay inta badan siiyaan macaamiisha ikhtiyaarka ah inay ka soo qaataan shay ay ka dalbadeen onlaynka ah goobta dukaanka dhexdiisa ah.
Marka lagu daro ku-darka guud ahaan waayo-aragnimada macmiilka, macaamiishani waxay si faa'iido leh u soo bandhigayaan alaabooyin badan oo dukaanka ah, taas oo inta badan keenta iibka badan. U oggolaanshaha macaamiisha inay "dukaanka daaqada" ku iibsadaan alaabada iyagoo isticmaalaya kanaalada ay doorbidayaan, ganacsiyadu waxay ka dhigi karaan khibradda wax iibsiga ee u dhexeeya adduunyada khadka tooska ah iyo kuwa khadka ah xitaa mid fudud.
Dhabarka dambe, ganacsigaagu waxa kale oo uu ku siin karaa doorashooyin geyn badan oo ka baxsan adeegga keenista dhaqameed ama ka soo qaadida dukaanka. Bixinta doorashooyin badan oo keenista iyo soo celinta waxay kaa caawin kartaa in meesha laga saaro dhibcooyinka isku dhaca macmiilka, mar labaad, ku daraya waayo-aragnimada macmiilka ee aan xishoodka lahayn.
Soo celinta ayaa si gaar ah muhiim ugu ah qaybtan isla'egta ah. Marka loo eego daraasadda UPS 2019:
73% dadka wax ka iibsada khadka ayaa sheegaya in waayo-aragnimada soo celinta ay saameynayso suurtagalnimadooda inay mar kale wax ka iibsadaan tafaariiqle.
Dhab ahaantii, marka la eego doorashada soo celinta soo celinta ama ku noqoshada dukaanka ka dib iibsashada internetka, 39% US iyo 42% jawaabeyaasha Kanadiyaanka waxay door bidaan inay alaabta si toos ah ugu soo celiyaan dukaanka. Waa maxay sababtu? Way dhakhso badan tahay, ku habboon tahay, waana bilaash. Waxaa sidoo kale jira walaacyo yar oo ku saabsan dib u dhacyada lacag celinta.
Marka la kala diro darbiyada u dhexeeya kanaalada, macaamiishu waxay la falgali karaan astaantaada kaliya maahan si aan kala go 'lahayn laakiin sidoo kale qaab dareemaya dabiiciga ugu badan.
Kobcinta iibka iyo gaadiidka
Dib u tixraacaya Harvard Business Review barashada, kanaalada badan ee macaamiishu isticmaalaan, waa inta ay qiimo badan u leeyihiin ganacsiga.
Iyada oo ku saleysan natiijooyinka:
"Macaamiishii isticmaalay 4+ channels waxay ku qarash gareeyeen 9% wax ka badan dukaanka, celcelis ahaan, marka la barbardhigo kuwa isticmaalay hal kanaal."
Dukaamada Omnichannel, samaynta cilmi-baarista khadka tooska ah waxay u horseedaa kharashyo badan oo dukaanka dhexdiisa ah. Intaa waxaa dheer, dukaamaystayaashan sidoo kale aad bay daacad u yihiin waxayna u badan tahay inay wax badan soo iibsadaan muddo ka dib.
Lix bilood gudahood ka dib waayo-aragnimada wax iibsiga ee Omnichannel, macaamiishani waxay soo galeen 23% ka badan oo ku celcelinta safarrada wax iibsiga ee dukaamada tafaariiqda waxayna u badan tahay inay kula taliyaan astaanta qoyska iyo asxaabta marka loo eego kuwa isticmaalay hal kanaal.
Daraasad ay samaysay Business Insider ayaa sidoo kale xaqiijisay isbeddelkan. Inta badan macaamiishu waxay la falgalaan ganacsiga iyagoo adeegsanaya kanaalo kala duwan, waxay u badan tahay inay iibsadaan alaabada.
Sida cilmi-baadhistu muujinayso, waayo-aragnimada Omnichannel waxay noqon kartaa istaraatijiyad awood leh si looga gudbo tafaariiqda dhaqameed oo kor loogu qaado dakhliga si weyn.
Xog wanaagsan & cabbir.
Sida macaamiishu ula falgalaan summadaha kanaalo badan, xogta kanaaladaasi waxay ururiyaan sida caadiga ah nolosha silos sidoo kale. Mid ka mid ah, kanaal kastaa wuxuu leeyahay ujeedo gaar ah, ujeedo gaar ah oo loogu talagalay ururinta xogta aan had iyo jeer u tarjumin nidaamyada kale. Si kale haddii loo dhigo, si fiican isuma wada hadlaan.
Tusaale ahaan, sidee ayaad uga faa'iidaysan kartaa xogta macmiilka la falgala dukaankaaga onlaynka ah, bogga Facebook, iyo abka mobaylka? Tani waxay noqon kartaa caqabad la'aanteed tignoolajiyada saxda ah.
Mar haddii kanaal kastaa ururiyo xogta macmiilkiisa, waxa ay noqon kartaa wakhti qaadata oo ay adagtahay in lagu xidho dhibcaha si dhab ahaan loo fahmo hab-dhaqanka macaamiisha ee meelo badan oo taabasho ah. Tani waa halka habka Omnichannel uu u horseedi karo falanqayn wanaagsan, ololeyaal wax ku ool ah iyo bartilmaameed, iyo ugu dambeyntii, beddelaadyo la hagaajiyay.
Marka aad leedahay muuqaal ku saabsan sida macaamiishu ula falgalaan dhammaan kanaalada guud ahaan, waxaad heli doontaa xog badan oo macnaha guud ah si aad u samayso go'aamo xog ogaal ah oo aad si fiican ula xiriirto macaamiishaada. Sidee? Adiga oo bixinaya khibrado gaar ah oo badan goobta saxda ah iyo wakhtiga saxda ah.
Helitaanka muuqaal wanaagsan oo ku saabsan sida macaamiishaadu ula falgalaan dhammaan kanaalada waxay kaa caawin doontaa inaad siiso khibrado shakhsiyeed oo dheeraad ah, wakhtiga saxda ah, meel kasta oo ay joogaan.
Dabcan, maahan mid toos ah ama sahlan in la fuliyo yoolkan. Si loo bixiyo khibradaha gaarka ah ee qaybaha kala duwan, ganacsiyadu waxay u baahan yihiin qalabyo midayn kara xogta aamusan oo bixisa 360 aragtida safarka macaamiisha oo dhan.
Waxaa jira siyaabo badan oo kala duwan oo loogu soo bandhigo khibradaha gaarka ah macaamiisha. Aasaas ahaan, Platform-ka Khibrada Dijital ah (DXP) wuxuu u shaqeeyaa sidii saldhigga dhexe ee ganacsigaagu uu ku xakameyn karo oo uu ku xiri karo meelo badan oo dhijitaal ah iyo is-dhexgalka. Asal ahaan, DXPs waxay u shaqeeyaan sidii xarunta taliska si ay u maareeyaan, u gudbiyaan, oo ay u wanaajiyaan waayo-aragnimada dhijitaalka ah ee safarka macaamiisha oo dhan.
Marka la eego xogta gaar ahaan, hal teknooloji oo ku soo koraya buunbuuninta, iyo sidoo kale korsashada, waa Platform Xogta Macmiilka (CDPs). Machadka CDP waxa uu CDP ku qeexayaa software baakadaysan oo abuura xog-ururin joogto ah oo midaysan oo la heli karo nidaamyada kale.
Asal ahaan, CDP-yadu waxay ururiyaan xogta kanaalo badan kuwaas oo inta badan lagu aamusay muuqaal keli ah, oo dhammaystiran. Qaadashada xogtan, waxaad dhisi kartaa astaan ​​midaysan agagaarka macaamil kasta marka ay la falgalaan ganacsigaaga kanaalo badan. Marka xogtani noqoto mid habaysan, waxa lagu faa'iidaysan karaa iyada oo loo marayo agabka suuqgeyneed ee kale si kor loogu qaado isdhexgalka macaamiisha.
Intaa waxaa dheer, mid ka mid ah tiirarka CDPs waa ka faa'iidaysiga Sirdoonka Artificial (AI) iyo Barashada Mashiinka (ML) si loo soo saaro fikrado qoto dheer oo macaamiisha ah iyo talooyinka ololaha waxtarka leh. Sida xog-ururinta u korto, madalku wuu sii caqli badnaan doonaa.
Sida laga soo xigtay Gartner, xogta macaamiisha iyo falanqayntu waa isbeddel sii kordhaya oo gaadhi doona korsashada guud labada ilaa shanta sano ee soo socota. Farsamooyinkan waxaa ka mid ah matoorada shaqsiyeynta, falanqaynta safarka macaamiisha, Codka-macmiilka (VoC), CDP, Master of Data Management (MDM), iyo falanqaynta adeegga macaamiisha.
Marka la eego xariiqda hoose, ka faa'iidaysiga xogta si wax ku ool ah ayaa u oggolaanaysa kharashka suuq-geynta si aad u gaarto ROI sare. Si kastaba ha ahaatee, xogta wanaagsani ma wanaajin karto iibka oo kaliya, waxay sidoo kale awood u siisaa ganacsiyada inay si wanaagsan ugu adeegaan macaamiisha.
Tignoolajiyadan soo koraya, waxa jirta fursad aad ku wanaajiso is dhexgalka kasta oo qiimo leh oo lala yeesho macaamilka. Iyo ugu dambeyntii, si loo bixiyo khibrado badan oo macaamiisha ah.
Ganacsiga Omnichannel oo leh WordPress.
Ganacsigaagu diyaar ma u yahay inuu bilaabo safarka Omnichannel? Sida goob furan oo dhijitaal ah, mid ka mid ah awoodaha ugu weyn ee WordPress waa awooda ay u leedahay in ay si diyaar ah ula mid noqoto tignoolajiyada heerka ugu wanaagsan.
Ilaa hadda, xalka ugu caansan eCommerce WordPress waa WooCommerce, kaas oo ka dhigaya 30% dhammaan suuqa eCommerce. Si la mid ah WordPress, mid ka mid ah awoodaha muhiimka ah ee WooCommerce waa wax-ka-beddeliddeeda iyo soo diyaarinteeda ballaarinta.
Milkiilayaasha ganacsiga ee baranaya sida loo sameeyo WooCommerce, horena u haystay dukaanka WooCommerce, ama qorsheynaya inay mid dhisaan, halkan waxaa ah siyaabo lagu wanaajiyo khibradaha macmiilka oo lagu dhex daro kanaalada kala duwan ee dukaamadaadu la falgalaan.
1. Qaadashada Maxalliga ah Plus
Asal ahaan, WooCommerce waxay siisaa ikhtiyaarka macaamiisha si ay uga soo qaataan badeecooyinka la gatay gudaha Soo-qaadista Maxalliga ah. Si kastaba ha ahaatee, astaantan gaarka ah waxay ku kooban tahay bakhaarro leh hal meel oo keliya.
Tafaariiqleyaasha leh goobo badan, xarumaha qaybinta, ama goobaha laga soo qaado, Local Pickup Plus waxay siisaa sifooyin adag iyo kontorool kooban. Dejintan waxaa ka mid ah soo bandhigida liiska meelaha la heli karo ee alaab kasta, qarinta meelaha aan kaydka ahayn, iyo oggolaanshaha soo qaadis la qorsheeyay.
Markii hore, Square wuxuu bilaabay inuu u oggolaado baayacmushtarka maxalliga ah hab ay ku aqbalaan bixinta kaadhka deynta shaqsi ahaan. Tan iyo markaas, madalku waxa ay u xuubsiibtay qalab ganacsi oo adag oo loogu talagalay iibiyeyaasha nooc kasta ah.
Hadda, madalku wuxuu bixiyaa is-dhexgalka WooCommerce si aad u aqbasho lacag-bixinta Square online, isku-dubarid maktabadda alaabta iyo agabka u dhexeeya labada nidaam, oo aad maamusho iibka gudaha dashboard-ka dhexe.
Haddii aad raadinayso inaad midayso khibrada khadka tooska ah iyo khadka tooska ah labadaba si aan kala go 'lahayn, tixgeli inaad isticmaasho Square oo qayb ka ah xirmadaada ganacsiga dhijitaalka ah.
3. Plugins qolo saddexaad
Marka lagu daro plugins-yada rasmiga ah ee ay taageerto Woo, waxaa jira is-dhexgalyo kala duwan oo ka caawin kara ganacsiyada inay gaaraan yoolalkooda Omnichannel.
Inkasta oo xulashooyinku aysan ku xaddidnayn liiskan, halkan waxaa ah dhowr qalab oo si fiican ula mid ah WordPress:
Plug-and-play nidaamka hawlaha tafaariiqda: skuIQ
Maareynta agabka iyo goobta rarida: Veeqo
Automation Omnichannel marketing: Omnisend
Waxaa xusid mudan in qaadashada habka Omnichannel aysan ku koobnayn plugins. Iyada oo leh meel furan oo il furan sida WordPress, kordhintu waxay ku fidaysaa isdhexgalka taageeraya API-yada macaamiisha.
Marka, sidee ayaad dhab ahaantii ugu xiri kartaa dukaanka jireed ee dukaanka internetka? Waxaa jira dhowr qaybood oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso.
Haddii aad u malaynayso in aad dooratay goob eCommerce ah oo taageerta omnichannel, waxaad u baahan doontaa inaad doorato nidaamka Point-of- Sales (POS) kaas oo sidoo kale sameeya. Marka labadan nidaam la isku daro, nidaamka POS wuxuu ururin karaa xogta khadka tooska ah iyo khadka tooska ah oo ay ku jiraan maktabadaha alaabada, macluumaadka iibka, iyo agabka-dhammaan hal meel oo isku xidhan.
Gaar ahaan, nidaamka POS-ku-saleysan daruurtu wuxuu ka hortagayaa baahida loo qabo kaydinta xogta jir ahaan qalabka taasoo keeni karta caqabado dhowr ah oo ay ku jiraan miisaan. Shayga POS ee Square waa tusaale wanaagsan oo omnichannel ah, xal daruur ku salaysan.
Xuddunta, shaqada aasaasiga ah ee nidaamka POS waxay u egtahay sidan:
Si aad u balaadhiso tusaalaha nidaamka Omnichannel POS, ka fikir inaad gasho dukaanka dharka aad jeceshahay, wakiilada iibka ayaa kugu hagi kara khibrada wax iibsiga ee is dhexgalka POS ee iPadka. Waxay ku tusi karaan noocyo kala duwan oo badeecooyin ah oo aan laga helin bakhaarka, ka raadi alaab online ah, oo ay samayn karaan liis kooban oo ah alaabta aad jeceshahay inaad isku daydo.
Si loo bixiyo khibrad qaabaysan oo joogto ah oo onlayn ah, xogtan waxa lagu kaydin karaa akoonkaaga talooyinka mustaqbalka ama taageerada wada sheekaysiga gaarka ah.
Markaad diyaar u tahay inaad gadato badeecad, wakiilka iibiyuhu wuxuu ka baaraandegi karaa lacag bixinta nidaamka POS oo wuxuu ururin karaa ciwaanka iimaylka ee dukaanka dhexdiisa. Habkaas, waxaad kula socon kartaa rasiidhada dhijitaalka ah, waxaad geli kartaa sahan kooban, oo aad la socotaa xayaysiisyada soo socda.
Intaa waxa dheer, ciwaanka iimaylka waxa lala xidhiidhin karaa xogtaada lacag bixinta oo waxa lagu xidhi karaa farqiga u dhexeeya isdhexgalka dukaanka iyo interneedka.
Haddii aad alaabta ku iibinayso kanaalo badan, markaa nidaamka Maareynta Macluumaadka Alaabta (PIM) ayaa isku xidhi kara dhibcaha. PIM waxay u shaqeysaa sidii hal meel oo lagu ururiyo, lagu maamulo oo lagu cusboonaysiiyo macluumaadkaaga badeecada—iyaga oo ka hortagaya ismaandhaafka ka jira kanaalada badan. Sida miisaanka ganacsiga ee suuqa caalamiga ah, nidaamka PIM wuxuu noqonayaa mid aad u muhiim ah si loo dhexdhexaadiyo xogta alaabta.
Haddi ay kuwani yihiin tignoolajiyada soo ifbaxaya ama adeegyada gaarka loo leeyahay, ganacsiyadu waxa ay ka faa’iidaysanayaan xawaaraha-suuqa, qiimaha gelitaanka hoose, iyo dabacsanaanta goob il furan—iyaga oo aan lagu xidhin dhismo-sharafeed, xidhan. Suurtogalyadu runtii waa kuwo aan dhammaad lahayn.
La soco qaybta labaad ee taxanahan saddexda qaybood ka kooban: Fahamka Isbeddellada Ecommerce: Ganacsiga Madax-la'aanta.
Ku xooji ganacsigaaga dhijitaalka ah WP Engine
Ku wanaaji istaraatiijiyadaada Omnichannel ee goobta la maamulo ee WordPress ee doorashada. Ogow wax badan oo ku saabsan WP Engine's WooCommerce Xalka martigelinta ama la hadal khabiir ku takhasusay oo maanta bilow!
20-ka Podcast ee ugu Fiican WordPress ee la Dhageysto 2021
Sida loo soo geliyo taarikhdaada sheekeysiga WhatsApp-ka ee Telegram